Rasmi: filimka Padmaavat iyo Talaaadiisa labaad ganacsiga uu sameeyay bye bye Kick! – Filimside.net
Rasmi: filimka Padmaavat iyo Talaaadiisa labaad ganacsiga uu sameeyay bye bye Kick!
Filimka Padmaavat ayaa ganacsi wacan sameeyay Talaadadiisa labaad wuxuuna keenay 5.75 Crore (Trade Figure) sida shabakada BOI soo daabacday wuxuuna sameeyay ganacsi ka ag dhow midkii uu Isniintii sameeyay.
Filimka Padmaavat ayaa haatan gaaray ganacsigiisa 214 Crore (Trade Figure) waana filimka 8-aad ee lacagaha ugu badan soo xareeyo asigoo ka talaabsaday filimka Kick oo 211.63 Crore (Trade Figure) keenay sanadii 2014.
Marka aan meel iska dhigno Baahubali 2 filimka Padmaavat wuxuu noqday filimka lacagaha ugu badan soo xareeyo oo aysan Sedexda Khan hogaamiye ka ahayn waana guul kale oo jilaayaasha filimkaan usoo hoyotay.
Padmaavat ganacsi 10 Crore ayuu kusii darsan karaa labada maalmood ee ka harsan tobaadkiisa labaad si ganacsigiisa 65 Crore u gaaro todobaadkiisa labaad oo kaliya taasi oo ka dhigi doonto filimka lixaad ee todobaadkiisa labaad ganacsiga ugu badan sameeyo waana guul kale oo aad u weyn.
Fadlan hoos kaga bogo filimka Padmaavat iyo ganacsiga uu sameeyay ilaa iminka soona daabacday shabakada BOI:
Todobaadka kowaad – 159.50 Crore (Qiyaas)
Todobaadka labaad – 54.75 Crore (mudo 5-maalmood)
Wadarta Guud – 213.75 Crore (Trade Figure)
salaan sare filimside waanad ku mahadsan tihiin sida fiican ee aad bulshada ugu adeegaysaan.
filimkan waxaa lagu qarashgareeayay 200 crore markaa siduu HIT/SUPERHIT/BLOKBUSTER ku noqon karaa
my idea imika waa AVERAGE laakiin sakiriyow bal adna ii sheeg sxb
thanks sooooo muuuch.
Walaalkeen hada waa Super Hit wuxuuna ku socdaa darajada Blockbuster hadii uu 300 Crore gaaro laakiin wey ku adag tahay.
Waa sax 200 Crore ayaa lagu qarash gareeyay laakiin miisaaniyadiisa inta badan culees ahaan wuu ka dagay madaama 125 Crore lagu iibsaday xuquuqdiisa qeybinta cajaladaha gudaha iyo dibada oo isku jirto.
Sidaa darteed 125 Crore ayaa lagu cabirayaa sida uu ku soo celiyo 100 Crore oo gudaha ah iyo 50 Crore in dibada laga helo waxaan ka hadlaayo waa saamiga laga helaayo ee ma ahan lacagaha guud ee uu soo xareeyo.
Sidaa darteed kooxda Padmaavat filimkooda 2014 Crore ayuu hada marayaa waxaana laga helay 100 Crore lacag gaareyso saami ah marka mashruucaan macaash waali ah ayaa laga helay ayadoo u dheer tahay xuquuqda Satelite-ka iyo daqliyo kale oo kooxdan soo galay weliba suuqyada caalamka ayuu ganacsi All Time Blockbuster ah ka sameenayaa.